Izizathu ezi-3 zokuba kutheni Ubona i-2: 22-Intsingiselo ye-222
Amaxabiso Amanani Iiprojekthi Zasekhaya Uhlobo Ukuphila Izindlu Ezithengiswayo Lungelelanisa Kwaye Ucoce Iindaba Ekhaya Ukhenketho Umthetho Wabucala Ibhlog
Ngaba ujonge ixesha kwaye wabona i-2: 22 kwikloko? Okanye, uyakhumbula ubona ama-222 ephupheni lakho? Qiniseka, ukhokelwe apha ukuba ufunde ngentsingiselo yama-222. Embindini wentliziyo yakho, unomdla wokwazi ngale ntsingiselo ingama-222.kutheni u-222 egcinaukuvelakwindlela yakho ngeli xesha.
Ukubona yonke indawo engama-222 kunokubonakala ngathi yinto eyenzekileyo kuwe, kodwa oku akwenzekanga ngengozi kwaphela. Kule meko, uya usazi ngakumbi ukuphinda-phinda imiqondiso ejikeleze wena, kwaye uziva ukuba iipateni ezingama-222 eziphindwe kathathu ngumyalezo okhethekileyo kuwe. Ngale ndlela, uvulelekile ukuba ufumane unxibelelwano oluvela kwindalo iphela ngoncedo lweengelosi zakho kunye nezikhokelo zomoya.
Iingelosi kunye nezikhokelo zomoya zinxibelelana nawe ngokusebenzisa iipateni eziphindaphindwayo zamanani kuba kulula kuwe ukuba uqaphele le miqondiso kaThixo ngamehlo akho enyama. Ke, ngelixa ucinga ukuba ukubona ingelosi inombolo 222 yinto eyenzeka ngamabona-ndenzile, ngumzuzu wokudibana ofuna ukuba uqaphele.
Kodwa yintoni iokomfuziseloIntsingiselo yama-222 okanye 2:22, kwaye kutheni uqhubeka ubona eli nani? Xa ubona inani elingu-222 ngokuphindaphindiweyo, intsingiselo yokomoya engama-222 ixhaphake kakhulu intsebenziswano kunye nokuvisisana nesiqu sakho kunye nabanye abakungqongileyo . Nokuba kukuphilisa ubudlelwane bomtshato, ukuqala ubuhlakani obutsha, okanye ukwenza iphupha, eli xesha sisiqalo se ukwanda okubonisa ukukhula kwindawo ethile yobomi bakho .
Njengokuba ubomi bakho buguquka buya kwelinye inqanaba, indalo iphela iyazilungisa kwaye iqhubeka ngokusebenza emva kwezigcawu ukukunceda. Qiniseka ukuba yonke into ihlala ikusebenzela. Kwaye njengoko uqhubeka notshintsho, ubomi babanye buye bachaphazeleka kwaye butshintshwa bakujikeleza, nawe. Khumbula, yonke into kunye nomntu wonke kolu luNxweme inomsebenzi kunye nenjongo kubukho babo.
Ukongeza, kubalulekile ukuba wazi ukuba xa ubona ukuphindaphindeka okungama-222, kukho intsingiselo ezininzi, kwaye kubalulekile kuwe ukuba usicwangcise ngocoselelo esi sigidimi sengelosi kwaye uyiqonde into engama-222 kuwe. Ukukunceda, nazi iintsingiselo ezi-3 zokomoya ezingama-222 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona ama-222 kuyo yonke indawo kweli nqanaba lohambo lwakho lobomi.
Intsingiselo yokuqala yama-222: Yenza iziQalo esitsha kwaye wandise ngeNdalo iphela
Nanini na xa uphinda-phinda ubona ipateni yamanani 222 okanye 2:22, luphawu lobuthixo lokwazisa ukuba umjikelo omtsha uza kuqala ebomini bakho. Lo mjikelo mtsha wamava umalunga nokukhula kunye nokwanda.
Nika ingqalelo kwiingcinga zakho kunye neemvakalelo zakho xa uqhubeka nokubona ama-222. Qaphela iimvakalelo ezibangelwa yimikhwa yakho yokucinga kwaye uqonde ukuba amandla afanelekileyo okanye amabi owabekayo kule nto uhlala ucinga ngayo ayakukudala uyinyani. Kumfanekiso omkhulu, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iingcinga zakho ziba ngamazwi akho nangamagama akho, ubonakalisa amandla okudala ngaphakathi kwakho ukubonisa yonke into ekujikelezile . Njengoko utitshala weShamanic uDon Miguel Ruiz watsho, 'Ilizwi lakho sisipho esivela ngqo kuThixo.' Ukubeka nje, iingcinga zakho ziba ngamazwi akho, amagama akho abe zizenzo zakho, kunye nezenzo zakho zenza eyakho inyani. Kwaye njengoko ubona, ubambe amandla endalo .
Ngale ngqiqo, uqala ukuqonda isizathu sokuba ubone ama-222 ngokuphindaphindiweyo. Uyathemba ukuba imbewu yeengcinga zakho iyakhula njengoko ubondla ngamagama akho, iimvakalelo kunye nezenzo zakho. Ukuba iingcinga ozityalileyo kwaye wazondla engqondweni yakho ziyakusebenzela ukuba ulunge kakhulu, qhubeka uzinkcenkceshela kwaye uzikhathalele. Iingcinga zakho ziya kuvela kumhlaba ochumileyo wengqondo yakho kwaye kungekudala uza kuzibona zibonakaliswa kumava akho obomi njengoyindalo yakho.
Ngokubalulekileyo, yiba nokholo kunye nomonde kwisicwangciso sakho sobomi. Eyona njongo inkulu, kokukhona kuya kufuneka ubeke amandla akho ngokwasemzimbeni, ngokwengqondo, ngokweemvakalelo nangokomoya kwisicwangciso sakho ukuze kwenzeke-kwaye kuya kwenzeka. Kuya kwenzeka ngexesha elifanelekileyo kuwe .
Ithetha ntoni i- <333
Gcina kunye nokuqinisekiswa okuqinisekileyo kunye nokubonwa. Eyona nto ibaluleke kakhulu, Thatha intshukumo ukubonisa indalo yakho . Into eza kwenzeka xa uqala ukuhamba. Isithandi sobulumko saseTshayina samandulo uLao Tzu wathi kungcono, 'Uhambo lweekhilomitha eziliwaka luqala ngenyathelo elinye.'
Ke, xa uqhubeka ubona i-222, ngumyalezo ocacileyo ovela kuThixo ukuba uhlakulela izinto ozibeke kwindalo iphela. Kodwa, zibuze oku: Ngaba le yinyani ofuna ukuyenza kunye namava?
Ukuba ubutyala iingcinga ezimbi, intsingiselo yama-222 kukwenza utshintsho kwaye uqalise ukutyala iingcinga kunye neenkolelo ezintle. Njengomlawuli kunye nombhali womdlalo wakho, ngokuqinisekileyo ungasitshintsha isicatshulwa sebali lakho nanini na. Inyaniso yakho ixhomekeke kuwe. Uya kukhetha yiphi indlela? Nokuba uthatha sigqibo sini, yazi oku: Umhlaba wonke uya kuzihlela ngokutsha ukuze yonke into iwele endaweni-yeyakho kuphela. Ungumdali wamava akho obomi, ke ngalo lonke ixesha ukubonakaliswa ngaphandle kungakuncedisi, kukuwe ukuba wenze utshintsho ngaphakathi, ke ukubonakaliswa kwehlabathi elingaphandle kuyatshintsha, nako.
Ngokubanzi, xa ubona i-222, intsingiselo kukuba ukwixesha leziqalo ezitsha kunye nomjikelo omtsha wolwandiso. Themba ukuba unamandla angenamda ekudaleni kwaye konke kuqala ngengcinga nje. Ukuba uziva ulungile malunga nembewu yengcinga oyityalileyo, kungekudala uza kufumanisa ukukhula okuphezulu kwendalo yakho.
Hlala ukhumbula, Ulapha ukudala kunye nokwandisa ngeNdalo . Ngenxa yoko, apho iingcinga zakho ziya khona, amandla ahamba. Yenza. Yenza. Yenza .
Gcina ukhumbula ukuba umjikelo omtsha wobomi oza kungena kuwo uxhomekeke kwipatheni yamanani amathathu oza kuyibona. Nika ingqalelo le miqondiso kaThixo kuba ezi ziintsikelelo ezikhokela indlela yakho.
Intsingiselo yesibini ye-222: Sebenzisa umoya wentsebenziswano kubuntu bakho bangaphakathi nakubudlelwane bakho
Enye intsingiselo engama-222 kunye nesizathu sokuba ubone u-2: 22 ukuphindaphinda kukuba uyakhunjuzwa sebenzisana noMhlaba . UMdali ongenasiphelo ukumema ukuba ujonge ngakumbi kwinto eyenzekayo kwihlabathi elikujikelezileyo-elinxulumene nobudlelwane nesiqu sakho sangaphakathi, ubudlelwane bakho nesiqu sakho, kunye nolwalamano lwakho nabanye abakungqongileyo.
Kwiskimu esipheleleyo sezinto, bonke ubudlelwane bakho buqala ngoqhagamshelo lwakho oluphambili kuMthombo kaThixo. Yiyo le ubudlelwane obusisiseko obumisela injongo yakho yokubakho kobu bomi . Ke xa ubona i-222, uyakhumbula ukuba ubomi benziwe lulo lonke unxibelelwano olwenzileyo kweli lizwe kwaye konke kuqala ngonxibelelwano lobuqu bakho bangaphakathi, obunguMthombo oNgcwele ongaphakathi kuwe.
Sebenzisana noBuntu bakho bangaphakathi
Ubuntu bakho bangaphakathi okanye isiQinisekiso seNyaniso bubunyani bakho bokwenyani nobungunaphakade ; ayitshintshi ngezigaba ezahlukeneyo zobomi bakho. Njengoko ufunda ngakumbi ngoMntu wangaphakathi, uye wazi iimfuno zakho kwaye uqale ukusebenzisana ngakumbi neminqweno yomphefumlo wakho. Xa umnqweno wakho wotshintsho umkhulu kunomnqweno wokuhlala kwindawo yakho yokuthuthuzela, kulapho ulungele ukutshintsha .
Ngolu tshintsho ebomini bakho, ubona ezingama-222 zivela phambi kwakho. Njengoko ingelosi inombolo 222 ikhokela indlela yakho, uqala ukukhumbula ukuba Isitshixo sokusebenzisana nesiqu sakho 'uhamba nokuhamba' kwaye uyithemba yonke inkqubo . Nangona kunjalo, xa uzama ukulawula isiphumo sakho ngokucwangcisa ngendlela yakho, uxelela i-Universe ukuba awuyithembi. Kodwa xa uqala ukuthembela, uyayamkela kwaye uyivumele imeko ebomini bakho ukuba ivele endaweni yokumelana nayo. Uyaqonda ukuba ukwamkelwa akuthethi ngokunikezela; imalunga ukukhulula ulawulo lwakho lwesiphumo kunye nokuvumela uMhlaba ukuba uthathe indawo ukuze ndikubonise indlela ebhetele.
Khumbula, isikhokelo sakho sangaphakathi sinxibelelene ngqo noMdali ongenasiphelo ngaphakathi kwakho, kwaye xa umamele, oku kukhokelela ekubeni uphile ubomi bokuzithemba okupheleleyo. Ngesi sizathu, i Eyona ndlela yokuthembela kwindalo iphela kukuthemba ilizwi elilumkileyo lobuqu bakho bokwenyani .
Ngale ndlela, intsingiselo yama-222 kukusebenzisana nelizwi lakho elingaphakathi elinobulumko. Ukusebenzisana malunga nokuyeka kwaye uthembele kuMdali oyiNgcwele. Ngamanye amazwi, ukuyeka sisenzo senkululeko apho uvumela uMhlaba ukuba uphinde uzilungiselele ukuzisa izixhobo zokukunceda. Ngokuthembela, uyabona ukuba kuhlala kukho isisombululo esifumanekayo kuwe. Ke, xa ubona ama-222, intsingiselo kukuba uyasebenzisana nokuhamba kweNdalo iphela kwaye uzivulela amathuba angenakuthelekiswa nanto. Kwaye ekugqibeleni, unenkululeko yokufumana enye into okanye wena vumela into ebhetele ukuba ikufumane .
Sebenzisana nesiqu sakho ngokwasemzimbeni
Xa usebenzisana nesiqu sakho sangaphakathi, uvula indlela eya kwintsebenziswano nesiqu sakho sasemzimbeni. Kule ndlela yama-222, uyakhunjuzwa ukuba uthathe amanyathelo okuzithanda, ukuzamkela, nokuzixolela.
Xa uzithanda, uyazamkela ukuba ungubani ngalo mzuzu kwaye wamkela zonke iinxalenye zakho ongenakukwazi ukuzitshintsha. Ngokukhulisa umzimba wakho, ingqondo kunye nomoya, ungoyena mntu ubalaseleyo onokuba nguye . Entliziyweni yakho, uziva ufanelwe luthando kwaye ulilungu. Kwaye emzimbeni wakho, unolwazi olunzulu ngaloo nto ulungile kwaye unele .
Njengomntu, uqala ukukhumbula ukuba wenza konke okusemandleni akho ngolwazi onalo kuyo nayiphi na imeko. Xa uzamkela ngokupheleleyo njengomntu onjalo ndisafunda ndizama ukufumana indlela eyiyo , ungaqala ukuzixolela ngokusilela, kwaye oku kuya kukhokelela kumnyango wenkululeko wokuxolela abanye. Xa uqala ukuxolela abo bakukhathazileyo, uqala ukuphilisa imiba engasonjululwanga ngaphakathi kwakho. Eyona nto ibaluleke kakhulu, uxolelo lokwenyani kuwe nakwabanye lwenzeka xa usamkela into yokuba elidlulileyo lenziwe kwaye uzivumela ukuba uqhubeke kwaye uvele ngaphakathi.
Ngenxa yoko, kule meko, xa ubona u-222, intsingiselo imalunga nokuxolelwa. Uyaqonda ukuba ukuxolelwa kukwenza uzive ukhululekile. Kwaye xa usenza into kule nkululeko, uyaqonda ukuba usebenzisana ngokwenene nesiqu sakho kwaye ufumana isitshixo sokuvumelana ngaphakathi. Ngale ndlela, ufumanisa ukuba Ukuvisisana nesiqu sakho nokuvisisana nehlabathi kuthetha ukuba ukhululekile .
Bambisana nentsebenziswano yakho
Ukuba utshatile okanye ubambisene nothando kwaye ubona ingelosi inombolo 222 iphindaphindeka ebomini bakho, i-Universe ikukhathaza ukuba wenze ixesha leqabane lakho ukuze ufunde kwaye uphonononge ngakumbi malunga nomanyano lwakho kunye. Ngenxa yokuba utshintsho lwenzeka, lonke ubudlelwane buguquka. Kule meko, iimfuno zeqabane lakho zisenokuba zitshintshile, kwaye xa ubona i-222, intsingiselo kukuba ukulungele ukunceda ukuhlangabezana neemfuno ezintsha zeqabane lakho ngokuziqhelanisa. Vumela ukuba utshintshe ngokukhululekileyo ngokuqonda imfuno yeqabane lakho lokukhula. Wamkele umntu omthandayo njengokuba enjalo ngoku, hayi njengokuba babenjalo ngaphambili . Ngembeko, yabelana ngeengcinga neemvakalelo zakho, thetha ngokunyanisekileyo nangobubele, kwaye ukulungele ukuxolela kwaye ufumane uxolelo ukuze nakhe kunye kunye kwaye niqhubele phambili ngokuvisisana. Ngokubanzi, ubudlelwane bakho buquka ukusebenzisana, kwaye yintsebenziswano apho kukho ukuxhasana kunye nokwenza okona kulungele nina nobabini kuhambo lwenu kunye. Ngalo lonke ixesha khumbula ukukhuthazana omnye nomnye kuba inkqubela phambili iyenye izisa izibonelelo ezibini. Ngale ngqiqo, uqala ukuqonda ukuba kutheni uqhubeka ubona i-222.
Ngaphezulu, kubalulekile ukuba uqonde ukuba ubudlelwane bakho sisipho sothando kuwe esivela kuMdali ongapheliyo. Kuba uthando ludla ngokubonakaliswa ngokunikela, i UMdali ngoyena mntu uphisa konke . Ngesi sipho, unomthombo wangaphakathi wothando ukuze wena neqabane lakho nikhululeke ukuba niphane kwaye nifumane omnye komnye.
Lilonke, isangqa sobomi simalunga nokunikela nokwamkela. Yonke into oyikhuphileyo kwiNdalo iphela, uya kuyifumana ibuyela kuwe. Ngesi sizathu, iintsikelelo ozixhasayo zizintsikelelo ozifumanayo. Kwaye xa unika abanye uthando, ngokunjalo nakuwe, uya kufumana uthando ukubuyekeza. Lo ngumthetho wokuphindaphinda okwenziwayo.
Njengobomi bakho buhamba, uya kuqala ukubona ukukhanya kothando ngaphakathi kweqabane lakho kukhanya, kwaye uya kuqala ukubona ukukhanya kothando kubo bonke abanye odibana nabo. Uyakhumbula ukuba oku kukhanya kothando nguThixo ngaphakathi kwakho. Ngale ngqiqo, uqala ukubona uThixo kuwo wonke umntu. Kumfanekiso omkhulu, xa nincedana, uyaqonda ukuba uThixo uyamnceda uThixo. Kwaye ekugqibeleni, ukusondela kwakho kuThixo, kokukhona usazi ngokwenyani.
Sebenzisana Nabanye Elizweni
Ngokubanzi, xa ubona ama-222, sisikhumbuzo sokuba unendima yokubambisana kubo bonke ubudlelwane bakho. Uyaqonda ukuba kubalulekile ukuzikhathalela wena kuqala ngokuzibeka kwindawo apho kunokwenzeka ukuba uncede abanye. Ngelixa ufumana ibhalansi elungileyo, kukusebenzela wena kunye nawo wonke umntu ebomini bakho.
Ngale ndlela, intsingiselo yama-222 kukwenza usebenze umoya wentsebenziswano kwaye ube bhetyebhetye kwaye ubhetyebhetye ukwenza izinto ezinkulu zenzeke nabantu ebomini bakho. Nokuba ukhulisa usapho, unikela ngombutho, wenza umculo, wakha ishishini, okanye wenza utshintsho kwilizwe lakho, xa nisenza konke okusemandleni ukuze nisebenzisane kwaye nincedane ukuba nikhulisane, niyakha kunye kwaye nizobe amandla omnye komnye Ukutshintsha umhlaba ngeendlela zokunceda uluntu. Kule nkalo, womelele xa nisebenza kunye. Njengoko itshantliziyo laseMelika uHelen Keller lathi, Sisodwa sinokwenza okuncinci; ngokudibeneyo sinokwenza kakhulu.
Yiyo loo nto, xa usebenza nabanye, nifunda omnye komnye kwaye oku kukhokelela ekukhuleni kunye nokwanda ngokubanzi. Khumbula, xa iyonke, indalo iphela ihlala itshintsha kwaye iguquka. Ngesi sizathu, xa ama-222 esiya kumbono wakho, uyayibona loo nto Intsebenziswano kukubonakaliswa kokusebenza kunye ukudala umhlaba ongcono . Abantu banokusebenzisana ngenxa yezizathu zabo, kodwa emfanekisweni omkhulu, umoya wentsebenziswano ubhekisa ekusebenzeni kwentlalo-ntle yabo bonke-sisiseko sempumelelo yabantu.
Gcina ukhumbula, elinye lamabali okuphumelela kwehlabathi yayikukusebenzisana kweqela kunye nokuyilwa koMgaqo-siseko waseMelika owaseka urhulumente wesizwe waseMelika. UGeorge Washington wayengowokuqala ukutyikitya uMgaqo-siseko kwaye kamva waba ngumongameli wokuqala wase-United States ngo-1789. Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba umhla wokuzalwa kukaGeorge Washington ngowama-22 kuFebruwari (2/22). Ke, njengoko ubona kulo mzekelo, umhlaba wakho sisiphumo sendalo, kwaye womelele kunye xa wonke umntu ejoyina kunye.
Intsingiselo ye-11 11
Intsingiselo yesithathu ka-222: Vumelanisa ingqondo kunye nomzimba wakho
Xa ubona i-222, intsingiselo kukulinganisa kunye nokudibanisa impilo yakho iyonke-ngokwasemoyeni, ngokwengqondo, ngokwasemoyeni nangokwasemzimbeni.
Ukusuka kunxibelelwano lwakho kuMdali ongenasiphelo, amandla kaThixo ahamba ngokukhululekileyo aye engqondweni yakho. Unolwazi olunzulu lokuba xa uthandaza, ucamngca, uphilisa amandla, ufunda isotericism, okanye uhlala nje uzolile, ubambe ijelo elivulekileyo lonxibelelwano nobuthixo apho amandla nothando luhamba luza kuwe nangelakho.
Ngolu lwazi, ifayile ye- uqhagamshelo lokomoya oluvulekileyo kwingqondo yakho lunceda ukuba ufikelele kwizimvo neengcinga zobuthixo ke unokwenza ukhetho lobulumko kwindlela yakho yobuqu ekudaleni ubukhulu obunqwenelekayo kobu bomi. Kwaye kwinkqubo yokufunda kunye nokuqhubela phambili, uyakuqonda ukubaluleka kokulungelelanisa ingqondo yakho nobuThixo ukuze ufumane ukuvumelana kwengqondo nokuzisa ingcaciso kubomi bakho.
Ukuyithatha enye inyathelo, ingqondo yakho inxulumene ngqo nomzimba wakho, kwaye umzimba wakho umamele kwaye uthathe izikhombisi ezisuka engqondweni yakho. Ngenxa yokuba iingcinga ezingalunganga ezisuka engqondweni yakho zinokuvelisa uxinzelelo lweemvakalelo kunye nokungahambi kakuhle okuye kwehle kwaye kube nefuthe elibi emzimbeni wakho, ufunda ukuba Eyona ndlela yokufikelela kwimvisiswano emzimbeni wakho kukuba ube neengcinga ezingaguquguqukiyo ezizisa uyolo nolwaneliseko kuwe . Olu lonwabo luphela lukukhokelela ekubeni ube sempilweni. Uyayiqonda into yokuba xa iingcinga zakho zinethemba elingakumbi, iimvakalelo zakho ziba ntle ngakumbi, kwaye xa iimvakalelo zakho zingqinelana, umzimba wakho wenyama uya kuba sempilweni entle.
Ngesi sizathu, uyakuqonda ukubaluleka kokucinga, kuba Ukucinga okuqinisekileyo kuthetha ukulungelelana ebomini bakho . Kwaye ekugqibeleni, uyaqonda ukuba eyakho iingcinga zangaphakathi ziya kuhlala zibonakala kwilizwe lakho elingaphandle . Ukusuka kolu luvo, xa ubona u-222 kaninzi, uya kuyazi into oyicingayo, into oyenzayo, kunye nento oyithethayo, kuba ichaphazela ukuba ekugqibeleni ungubani ngaphandle-nangaphakathi.
Kwiskimu esikhulu sezinto, iInombolo 222 sisikhumbuzo esivela kuThixoimpilo yokwenene ifika xa iimfuno zakho zokomoya, zengqondo, zemvakalelo nezomzimba zilungelelene kwaye zilungelelana. Ngale ndlela, xa ukhathalela ingqondo yakho, umzimba wakho uya kubulela kuwe. Kwaye xa ukhathalela umzimba wakho, ingqondo yakho iya kukubulela.
Yintoni omele uyenze ngokulandelayo xa uqhubeka nokubona i-222?
Intsingiselo yama-222 iphila ngokuvisisana nawe kunye nehlabathi elikujikelezileyo njengoko usiya uqaphela unxibelelwano lwakho noMdali oNgcwele.
Ngale nxu lumano, uzisa ukukhanya kwakho emhlabeni kwaye utshintshe ilizwe lakho elibonakalayo ngokujolisa amandla akho kwindawo efuna izipho okanye iitalente zakho . Uzixabisile izipho owazalwa nazo, kwaye xa uthembela kumandla akho, uqala ukuveza ngakumbi ubuchule bakho obukade bufihlakele kwimbonakalo.
Nokuba uzisa izipho kunye neetalente zakho esikolweni sakho okanye kwindawo osebenza kuyo, utyala imali okanye uthenga kwiinkampani ngentembeko, okanye uxhasa iinkokheli eziziphatha ngokunyaniseka kwaye zikholelwa kwinkululeko yakho yobuzibulo, ezi ziindlela nje ezimbalwa onokuthi usebenze ngazo noMdali ongenasiphelo kwaye tshintsha umhlaba. Impembelelo yakho izisa umoya kulo mhlaba, kwaye kwimbono iyonke, wenza izulu lakho emhlabeni. Ngokuqinisekileyo, wonke umntu owela umendo wakho ungumntu ongcono ngenxa yegalelo lakho. Lilonke uyakuqonda oko ulonwabo lwakho lokwenene kunye nokuzaliseka kunxibelelene nentlalo-ntle yabantu abakungqongileyo .
Ngoluntu, ufunda indlela yokuphila kunye nokuhlala ngokuvisisana omnye nomnye. Ukuba ubukwimo 'yomoya', uyaqonda ukuba kungalula kakhulu kuwe ukuba ushiye ngokukhawuleza okanye ubaleke imeko engonwabanga emhlabeni. Ngesi sizathu, ukuba ngumntu kukunceda ukuba unciphise isantya, kukubeka kuxanduva lwakho emhlabeni, kwaye kunceda ukuba ufunde indlela yokusebenzisana nabanye kunye nokwenza izinto ukuze zilungele thina sonke.
Xa nizidibanisa kwaye nisebenza ngokubambisana, nikrelekrele, ninamandla kwaye niyaphumelela. Niyadinga omnye nomnye ukuze nifunde omnye komnye, kwaye ngentsebenziswano kwilizwe elibonakalayo, uhlanga loluntu lunokuqhubela phambili kwaye luguquke. Ngolu lwazi, uqala ukukhumbula ukuba esi sizathu sokuba uhlale ubona ama-222 kuyo yonke indawo ekujikeleze.
Lilonke, xa ubona i-222 iphinda yenzeke ebomini bakho, intsingiselo kukuba ulungelelanise kwaye uhambelane nesiqu sakho kunye neLizwe liphela. Isitshixo sokukhumbula kukuba xa ubomi bakho buziva bungalingani, themba kwaye unokholo lokuba ubomi bakho buya kuhlala bufumana indlela yokuzilinganisela kwakhona . Yindlela yonke into esebenza ngayo, ke tumhlwa ekuhambeni kwakho kunye noMhlaba.
UMPHAKATHIPHAWULA:Le webhusayithi, iWillowSoul.com, inamalungelo obunini, kwaye akukho nxalenye yale webhusayithi enokukhutshelwa, iphinde yenziwe, irekhodwe, okanye isetyenziswe nangayiphi na indlela. Ilungelo lokushicilela © nguWillow Soul.
Isikhokelo soMntu oQhekekileyo kwiKhaya eliCocekileyo: Ezona Ndleko zinexabiso eliphantsi kunye nezona zisebenzayo
Ukufumana okungummangaliso okungama-21: Ubungqina beNtlekele-Okwangoku (Okwangoku iseseChic!)
Ukuthenga i-2.0: Zonke iindlela onokuGcina iMali ngakumbi kwiTgethi
Eyona peyinti iAnti yokuNxibelelana e-UK 
Yenza ikhaya lakho livumba kamnandi noJo Malone, iNest, kunye namaNqaku angakumbi okuThengiswa kweSikhumbuzo seNordstrom
Ngaba ufuna iYard enkulu? Hambisa apha
Kutheni umhla we-6 ku-Matshi ubambe isiTshixo kwisigqibo sakho soNyaka oMtsha
Fumana umbono weOld Hollywood eKhaya eliThengiswayo laseShirley Temple
Ukuzonwabisa, i-DIY Party ye-Decor Ideas kwi-Summer Collection
Unokwenza ntoni ngeNcinci, iAkward Gap emva kweSofa
Ngaphambi & Emva: Le $ Craigslist yeKhabinethi ngoku ilungiselelwe ukuGcina ngokuKhethekileyo
Nantsi into ekufuneka uyazi ngokuHamba eHawaii (ngaphandle kokuthenga i-Surfboard)
Ngaba ungayipeyinta iGrout ngeEmulsion?
Nasi isizathu sokuba ungafanele usebenzise iikiti zasekhaya ezicocekileyo, ngokutsho kwengcali yokuhlamba impahla
1212 intsingiselo yesidima somzimba
imiqondiso yeengelosi endlwini yam
umbono weengelosi ezinentsingiselo
Ithetha ntoni i-7/11
Ingelosi inombolo 911 doreen ubuhle
Intsingiselo yokomoya ye-1212
lithetha ukuthini inani u-1234
Copyright © 2022 Onke Amalungelo Agciniwe | hotelleonor.sk | Umthetho Wabucala